कावासोती नगरपालीकामा कुल ३८ हजार ९ सय २९ मतदाता, तपाईको वडामाकति मतदाता? कुन वडाको मतदान स्थल कहा ? | Hulaki Online
कावासोती नगरपालीकामा कुल ३८ हजार ९ सय २९ मतदाता, तपाईको वडामाकति मतदाता? कुन वडाको मतदान स्थल कहा ?
कावासोती, नवलपरासी जिल्लामा १५ वटा स्थानिय तह निर्धारण गरीएको छ । जसमा ७ नगरपालीका र ८ गाउपालीका रहेका छन । जस मध्यको एक हो कावासोती नगरपालिका ,कावासोती नगरपालिकामा ३८ हजार ९ सय २९ मतदाता रहेका छन । १७ वटा वडामा बिभाजन भएको कावासोती नगरपालिकामा सबै भन्दा धेरै वडा नम्बर ८मा ३ हजार सात सय ५८ मतदाता रहेका छन भने सबै भन्दा कम वडा नम्बर ९ मा १ हजार ६४ मतदाता रहेका छन ।
कावासोती नगरपालीकाको लागी २१ स्थानमा मतदान स्थल तोकीएको छ भने ४५ वटा मतदात केन्द्र रहेका छन । कावासोती नगरपालीकाको १ नम्बर वडामा २ हजार ९ सय ३० जना मतदाता रहेका छन भने एउटा मतदात स्थल र ३ वटा मतदान केन्द्र रहेको छ । १ नम्बर वडाका लागी जनकल्याण माध्यामिक बिद्यालय कावासोती रिठ्ठेपानीलाई मतदान स्थल तोकीएको छ । यसै गरी २ नम्बर वडामा २ हजार ८ सय ४७ मतदाता रहेका छन भने ,शिव माध्याविक बिद्याललाई मतदान स्थल तोकीएको छ जसमा ३ वटा मतदान केन्द्र रहने छ ।
वडा नम्बर ३ मा ३ हजर ६ सय ८ मतदाता रहेका छन । वडा नम्बर ३ का लागि दुई वटा मतदान केन्द्र तोकीएको छ , भने ४ वटा मतदान केन्द्र रहने छन । जनविकाश बिद्याश्रम अठ्ठाईस बिघा र जिवन ज्योती मावि लाई मतदान स्थल तोकीएको छ ।
कावासोती नगरपालिकाको ४ नम्बर वडामा १ हजार ६ सय ६६ मतदाता रहेका छन भने सरस्वती मावि हसौरालाई मदतान स्थल तोकिएको छ जहा २ वटा मतदान केन्द्र रहने छन , यसै गरी वडा नम्बर ५ मा १ हजार ७ सय २२ मतदाता रहेका छन भने कालिका मावि लक्ष्मिनगरलाई मतदान स्थल तोकीएको छ यहा पनी दुइ वटा मतदान केन्द्र रहने छन ।
वडा नम्बर ६ मा १ हजार ३ सय २२ मतदाता रहेका छन । ६ को लागी जनता मावि बिष्णुनगरलाई मतदान स्थल तोकीएको छ ,जहा दुई मतदान केन्द्र रहने छन ।
कावासोती नगरपालीकाको वडा नम्बर ७ मा कुल १ हजार ६ सय ८५ मतदाता संख्या रहेका छन । ७ का लागि नारायणी आधारभुत विद्यालय टरुवालाई मतदान स्थल तोकीएको छ, यहा पनि दुई मतदान केन्द्र रहने छन ।
कावासोती नगरपालीको वडा नम्बर ८ जहा सबै वडा भन्दा बढि मतदाता रहेका छन ,यहा ३ हजार ७ सय ५८ मतदाता संख्या रहेका छन भने ८ का लागी ज्ञानोदय मावि शिववस्तिलाई मतदान स्थल तोकीएको छ , यहा ४ मतदान केन्द्र रहने छन ।
नगरपालीकाको ९ नम्बर वडा जहा सबै भन्दा कम १ हजार ६४ मतदाता संख्या रहेका छन । वडा नम्बर ९ का लागी कावासोती आधारभुत बिद्याल कावासोतीलाई मतदान स्थल तोकीएको छ भने ,एउटा मात्र केन्द्र रहने छ ।
यसै गरी वडा नम्बर १० मा १ हजार ४ सय ६५ मतदाता रहेका छन । १० का लागी जनता मावि मगरकोट लाई मतदान स्थल तोकीएको छ ,जहा दुई वटा मतदान केन्द्र तोकीएको छ ।
कावासोती नगरपालीकाको वडा नम्बर ११ मा कुल १ हजार ६ सय ३१ मतदाता रहेका छन । ११ का लागी नेपाल राष्ट्रिय आधारभुत बिद्याल कुडौलीलाई मतदान स्थल तोकीएको छ ,यहा पनि दुईवटा केन्द्र रहनेछन ।
यसै गरी कावासोती नगरपालीको वडा नम्बर १२ मा १ हजार ४ सय ३५ मतदाता रहेका छन , भने शान्तिनिकुञ्ज मावि डेउटीलाई मतदान स्थल तोकीएको छ ,यहा पनि दुई मतदान केन्द्र रहनेछन ।
वडा नम्बर १३ मा भने २ हजार ७९ मतदाता रहेका छन । १३ का लागी पिठौली माध्यामिक बिद्याल कुशनहरीलाई मतदान स्थल तोकीएको भने दुइ मतदान केन्द्र रहने छन ।
वडा नम्बर १४ मा ३ हजार ९० मतदाता रहेका छन । १४ का लागी तिन वटा मतदान स्थल तोकीएको छ भने मतदान केन्द्र ४ वटा रहने छन । १४ का लागी चन्द्रहंश आधाभुत बिद्यालय अग्यौली,जनता मावि त्रिभुवनटार र बालकल्याण आधारभुत बिद्यालय डण्डालाई मतदान स्थल तोकीएको छ ।
वडा नम्बर १५ मा २ हजार २ सय ४६ मतदाता रहेका छन ,भने चण्डेश्वरी आधारभुत बिद्यालय गोडारलाई मतदान स्थल तोकीएको छ , यहा ३ वटा मतदान केन्द्र रहने छन ।
यस्तै वडा नम्बर १६ मा २ हजार ६ सय २७ मतदाता रहेका छन । १६ का लागी दिपेन्द्र आधारभुत बिद्याल टाडिलाई मतदान स्थल तोकीएको छ ,यहा ३ वटा केन्द्र रहने छन ।
पछिल्लो पटक साविक कुमारवर्ती गाविसलाईनै कावासोती नगरपालीकामा मिलाएर बनाईएको १७ नम्बर वडामा ३ हजार ७ सय ५४ मतदाता रहेका छन , १७ का लागी त्रिभुवन वाल मावि ढोकी र सरस्वती मावी गोछडालाई मतदान स्थल तोकीएको छ भने , ४ वटा मदतान केन्द्र रहने जनाईएको छ । बैशाख -८, २०७४